Ingxaki yokugqibela ye-OnePlus 5 ichaphazela isandi xa urekhoda iividiyo | Iindaba zeGajethi
Imagazini yakutshanje ye-OnePlus 5 ichaphazela isandi xa urekhoda iividiyo
Iingxaki ze-OnePlus zibonakala zixhaphakile ngalo lonke ixesha kuthengiswa itheminali entsha kwintengiso. Ngokwazisa konke okutsha, abafana kwi-OnePlus baqala ukubeka iibhetri, hayi ukulungiselela ukuhambisa ngokukhawuleza iiterminal, kodwa nokuzama ukusombulula Inani elikhulu leengxaki eziboniswa zizixhobo xa zifika kwintengiso.
Ngethamsanqa, inkampani isebenza ngokukhawuleza kwaye ilungisa iingxaki kodwa ngumfanekiso ngamnye kuluntu ayishiyi kwindawo entle kakhulu ngaphandle kokuba sisiphelo esineempawu ezintle kakhulu ngexabiso elifanelekileyo. Ingxaki entsha echaphazela i-OnePlus 5 ichaphazela ukurekhodwa kwesandi sevidiyo.
Kuyabonakala kwaye njengoko sinokubona kule vidiyo ingentla, uninzi lwabasebenzisi abakhalaze ukuba xa urekhoda iividiyo, isixhobo sirekhoda isandi kodwa kwisitishi esichaseneyo. Kule vidiyo sinokubona ukuba xa urekhoda umculo, umzekelo osibonisa ngokucacileyo ingxaki yesixhobo, Ukuba sizisa isixhobo ngasekunene, kuvakala kwisithethi sasekhohlo sezixhobo zakho, kungenjalo. Ngaphandle kokuba unekhompyuter enezithethi ezibini ezahlukileyo okanye umamele ngee-headphone, ngekhe ukwazi ukuyibona ingxaki.
Le ngxaki ingasombululwa ngokulula ngohlaziyo lwesoftware, kuba kuyacaca ukuba le ngxaki iphinda iveliswe kuphela xa sibhala kwindawo ethe tyaba, hayi xa siyibeka nkqo, indawo yokurekhoda iividiyo ekufuneka zingavumelekanga, kuba xa sidlulisa umxholo kwikhompyuter okanye kumabonwakude, ayisivumeli ukuba sonwabele wonke umxholo ojikeleze isenzo esirekhodayo, siyikhuphe ngokupheleleyo kwimeko, umxholo ngamanye amaxesha ubaluleke kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Imagazini yakutshanje ye-OnePlus 5 ichaphazela isandi xa urekhoda iividiyo
Isamsung isebenza kwi-headset eyiyo ezimeleyo
INetflix ilungiselela amaxabiso amatsha eSpain ngokokuvuza okutsha